युवती अघि सारेर पुडासैनीलाई मर्न बाध्य पार्ने रवि लामिछानेलाई किन लिइएन हिरासत ? - Nepal's Digital News Paper
सोमवार, मंसिर २३, २०७६
युवती अघि सारेर पुडासैनीलाई मर्न बाध्य पार्ने रवि लामिछानेलाई किन लिइएन हिरासत ?
प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन ३०, २०७६
काठमाडौँ । विभिन्न घटना र ब्यक्तिगत जीवनलाई लिएर बारम्वार चर्चामा आइरहने रवी लामिछाने फेरी एक पटक गम्भीर आरोपबाट चर्चामा आएका छन् । आफ्नै पूर्व सहकर्मीलाई युवतीसँग फसाएर आत्महत्या गराएको आरोप रविमाथी लागेको छ । यो आरोप अनुसन्धान वा अन्य कसैले लगाएको भने होइन । उनकै पूर्वसहकर्मी सालिकराम पुडासैनीले आत्महत्याभन्दा पहिले भिडियो रेकर्डबाट लगाएका छन् । आत्महत्या गर्नुभन्दा अघि उनले भिडियो रेकर्ड गरेका थिए । भिडियो रेकर्डमा रविले युवतीसँग फसाएर आफुलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको बताएका छन् ।
दुई साताअघि चितवनको एक होटलमा आत्महत्या गरेका सालिकराम पुडासैनीले रेकर्ड गरेको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । रुदै उनले न्यूज २४ मा प्रवेशदेखि रवी लामिछानेले दिएको सास्ती र २४ छोडेपछि दिएको धम्कीका बारेमा रुदै र हात जोड्दै बयान गरेका छन् । पुडासैनीले रविसहित तीन जनाले आफुलाई मर्न बाध्य बनाएको उनले बताएका छन् ।
रविले अस्टेलिया पठाइदिने भन्दै एक युवतीसँग आफ्नो भेटघाट गराएको र उनीसँगै धेरै समय आफुले बिताएको रेकर्डमा बताएका छन् । ति युवतीलाई आफुले जागिर लगाइदिएको र पछि उनले नै आफुलाई गाली गर्ने गरेको बताएका छन् । ति युवतीलाई प्रयोग गरी आफुलाई बलात्कारी बनाउन रवी लागिपरेको भिडियो सन्देशमा बताएका छन् । रवि र युवराज कँडेलसहित तीन जनाले आफुलाई मर्न बाध्य बनाएको बताएका छन् ।
‘ मैले न्युज २४ छाडेपछि साथीहरुले तँलाई रवि र युवराज मिलेर फसाँउदैछन् भन्ने सुनेँ। वास्तवमा मलाई प्रेमिका, रवि र युवराज मिलेर मर्न बाध्य बनाएका हुन्’, भिडियोमा पुडासैनीले भनेका छन्। उनले आफू धेरै समयअघिदेखि नै डिप्रेसनमा रहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
रवि लामिछानेको शाररीक र मानसिक यातना भोग्न नसकेर आत्महत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपनि रवीमाथी राज्यले कानुनी कारवाही थालेको छैन । उनीसँग सोधपुछ पनि गरेको छैन । तर रविले भने आरोप प्रमाणित भए हदैसम्मको कारवाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । रवी, कँडेल र युवतीलाई हिरासतमा लिएर छानविन गर्न सामाजिक सञ्जालमा ठुलो दवाव शिर्जना भएको छ । तरपनि प्रहरीले उनीहरुलाई हिरासतमा लिएको छैन ।
कर्मचारी सरुवा मापदण्ड: स्थानीय तहका कर्मचारीको सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा
‘जलपरी’ गौरिकाको कीर्तिमानी, एउटै सागमा ४ स्वर्ण
प्रदेश ३ सरकारले सागमा पदक बिजेता खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने
तीन नेपाली बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप अमेरिकी नागरिक पक्राउ
सुटिङमा भारतलाई २० मध्ये १८ स्वर्ण
ठिक एक बर्षपछि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक डाकियो
बक्सिङमा भूपेन्द्रले थपे स्वर्ण पदक
आर्चरी: स्वर्णमा बंगालदेशको क्लिन स्विप
राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघमा गर्ने तयारी